प्रताप दासकाे नेपाल आइडल यात्रा – Everest Dainik
प्रताप दासकाे नेपाल आइडल यात्रा
मिठो मुस्कानका धनी ललितपुर झरुवारासीका प्रदाप दास नेपाल आइडलमा सेकेन्ड रनरअप बनेका छन् । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित नेपाल आइडलमा सयौं प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिनेर नेपाल अाइडलका लागि दावेदार अन्तत: सेकेन्ड रनर अप बन्न सफल पुगेका छन् ।
कतारको दोहामा भएको ग्राण्ड फिनालेमा प्रताप दास सेकेन्ड रनर अप बनेका हुन् । दोहाको ओमसलाल अल सानिम ईण्ड्रस्ट्रिय एरिया ग्राण्डमलको एम्पीथिएटर हलमा भएको कार्यक्रमा पोखराका बुद्ध लामा नेपाल आइडलका विजेता बने भने मोरङका निशान भट्टराई फस्ट रनरअप ।
परिवारको सांगीतिक पृष्ठभूमिले सांगीतिक क्षेत्रमा आउन प्रेरणा मिलेको बताउने प्रताप नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा पहिले नै नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा होमिएका हुन् ।
प्रताप दासले नेपाल आइडलको अडिसनमा ‘ती लोलाएका ठूला’ गीत गाएर जर्जहरुको मन जित्न सफल बनेका थिए । नेपाल आइडलमा पटक–पटक बटम थ्रीमा परे पनि दर्शकको भोटले गर्दा नेपाल आइडलको फाइनल सम्म पुग्न सफल भए प्रताप । गीत गाउँदा पनि मुस्कुराएर गाउने उनीप्रति दर्शकको छुट्टै मोह छ । गीतलाई गाउँदा अन्तरा नै विग्रिए पनि त्यसलाई सच्चाउन सक्ने उनीमा खुवी रहेको जर्जहरुले तारिफ गर्दै आएका छन् । ‘हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे’, ‘तालको पानी, माछीले खानी’, ‘म यस्तो गीत गाउँछु’, मोटरसाइकलमा’, ‘गुराँसै फुल्यो वनैमा’ लगायत दमदार प्रस्तुति दर्शकका लागि दिएर प्रतापले दर्शकको मन जितेका थिए ।
एसएलसीपश्चात संगीतमा लागेका प्रतापले विद्यालय, कभर सङ हुँदै केही चलचित्रमा समेत गीत गाएका छन् । कलानिधि संगीत महाविद्यालयले आयोजना गरेको ‘कलानिधि आइडल’ जितेका उनी नेपाली तारा सिजन ३ मा पनि सहभागी भएर चौथो चरणसम्म पुगेका थिए ।
उनले चलचित्र प्रेमगीत २ मा इन्दिरा जोशीसँग ‘मोटरसाइकलमा’ गीत गाएका छन् । त्यस्तै नाईँ नभन्नु ल ३ को गीत ‘अलिकति स्वीट’मा मेलिना राईसँग स्वर दिएका छन् । उनले गीत एल्बममा पनि स्वर दिएका छन् ।
प्रतापले १ करोड ३२ लाख ५२ हजार ८ सय ४९ भोट पाएर तेस्रो भए । उनले १० लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेका छन् ।
फाेटाे : गुगलबाट
ट्याग्स: nepal idol, Pratap Das
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारस शाहका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सांसदको माग
संजय दत्त र मनिषा कोइराला फेरि एकसाथ काम गर्दै
भाेलिदेखि बुधले गाेचर परिवर्तन गर्दै, के प्रभाव पर्छ तपाइकाे राशिमा?
बिग बोस-१३ अन्तिम चरणमा; टीजरमा सलमानले दिए यस्तो चेतावनी (भिडिओ सहित)
सेती नदीमा बगेर ७ जनाको मृत्यु
जहाजभित्रै चोरी, २ चिनियाँ नागरिक पक्राउ
पुडासैनी आत्महत्यापछिकाे परिस्थितिबारे मेयर रेणुले जारी गरिन् विज्ञप्ति (पूर्णपाठ)
शालिकराम आत्महत्या प्रकरणः के भनिन् अस्मिताले बयानमा?
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणः ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ आयो
यौनकाण्डको अडियो बाहिरिएपछि महिलाद्वारा आत्महत्या
प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दै फेसबुक लाइभमा खुकुरी देखाउने पक्राउ